आईफा अवार्ड स्थगन गर्नु हुँदैन, नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिन्छ : डा. दिक्षित – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
आईफा अवार्ड स्थगन गर्नु हुँदैन, नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिन्छ : डा. दिक्षित
काठमाडौँ, १८ असार, २०७६ । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले आईफा अवार्ड कार्यक्रम स्थगन गरेकोमा आक्रोश पोखेका छन् । यसमा नेपाल सरकार दोषी भएको र नेपालीहरु पनि दोषी भएको प्रतिक्रिया उनले दिए । उनले आईफा अवार्ड स्थगन गर्दा विस्तारै सुध्रन लागेको नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि बिग्रने ठोकुवा गरे ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दिक्षितले भारतसँग नेपालको महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको सुनाए । तर, आईफा अवार्डबारे सुरुवातदेखि नै विरोध हुनु र यो विषय मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदसम्म पुग्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘आईफा अवार्ड नगर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिनु गलत काम भयो । आईफामार्फत भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिन थालेको थियो । त्यो पनि अब बिग्रिने भयो ।’
आफूहरुले सन १९९६ मा काठमाडौंमा भारतीय चिकित्सकहरुको सम्मेलन सफल रुपमा आयोजना गरेर देखाएको स्मरण गराउँदै दिक्षितले भने, ‘हामीले चार हजार भारतीय चिकित्सकहरुको भव्य सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न गरेका थियौं । भारतको चिकित्सकहरुले पहिलो पटक देशबाहिर गरेको सम्मेलन थियो, उहाँहरुले आग्रहअनुसार मैले व्यवस्थापन गरेको थिएँ ।’ उक्त सम्मेलनमा नेपालले एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको उनले जनाए ।
उक्त सम्मेलनले नेपालमा राम्रो व्यापार भएको पनि दिक्षितले स्पष्ट पारे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय स्वास्थ्यमन्त्रीको उपस्थितिमा उक्त सम्मेलन बानेश्वरको बिआईसिसी भवनमा गरेको उनले सुनाए । उनले आईफा अवार्ड सञ्चालन गर्न नेपालले पैसाभन्दा पनि ईज्जत दिनुपर्ने थियो भन्ने धारणा राखे । उनले भने,’भारतीय चलचित्रकर्मीहरुले एउटा मुभीबाट अरवौं रुपैयाँ कमाउँछन् ।’
प्रकाशित मिति: 2019-07-03 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged आइफा अवार्ड सुन्दरमणि दीक्षित
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र नेपाली विद्वानबीच चीनमा छलफल
प्रचण्ड र बादलको पारिवार नै नुहाउन तातोपानीमा !
Tags: आइफा अवार्ड, सुन्दरमणि दीक्षित